စူပါငွေ Buster |
သငျသညျ IWG ထံမှငွေ Buster တစ်ဦးကြီးတွေပန်ကာမဟုတ်ရင်တောင်, သငျသညျအဖြစ်သူတို့ထံမှဒီဂိမ်းအသစ်ကိုကြိုက်လိမ့်မယ် စူပါငွေ Buster ငွေ Buster ထက်ပိုကြီးတဲ့ပိုကောင်းတဲ့ဆုကမ်းလှမ်း. ဤ အခမဲ့လှည့်ခြင်းများအဘယ်သူမျှမအပ်ငွေလိုအပ် ဂိမ်းပျော်စရာ၏သင်ပိုမိုစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့ဆုနှင့်ဝန်မှဆောင်တတ်၏.
IWG အွန်လိုင်းတစ်ဦးဦးဆောင်ပြုစုသူနှင့်ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းဖြစ်ပါသည်, ထင်ရှားတဲ့ထီနှင့်လောင်းကစားအော်ပရေတာများအတွက်လက်ငင်းအနိုင်ရရှိဂိမ်း. အဆိုပါကုမ္ပဏီနက်နက်ရှိုင်းရှိုင်းဆွဲဆောင်မှုရှိတဲ့နှင့်စိတ်ဝင်စားဖွယ်ဂိမ်းစေသည်နှင့်ဤ အခမဲ့လှည့်ခြင်းများအဘယ်သူမျှမအပ်ငွေလိုအပ် ဂိမ်းသူတို့ထဲကတစ်ဦးဖြစ်ပါတယ်.
ဤ အခမဲ့လှည့်ခြင်းများအဘယ်သူမျှမအပ်ငွေလိုအပ် ဂိမ်းအစားပုံမှန်အတိုင်း reels နှင့်လှည့်ခြင်းများ၏အန်စာတုံးတစ်လိပ်ကို အသုံးပြု. တီးခတ်နေသည်. သင်လုပ်ကွက်ရမ်းပြီးစတင်ခင်မှာ, သင်သည်သင်၏အလောင်းအစားသတ်မှတ်ထားရန်လိုအပ်. ပေါ်နှိပ်ခြင်းအားဖြင့်လိုအပ်သောငွေပမာဏကိုရန်သင့်ကစားပွဲ Set (+) နှင့် (-) ခလုတ်. သင်ကစားပွဲခန့်ထားပြီပြီးတာနဲ့, စတင်ရန် PLAY ကိုကလစ်နှိပ်ပါ. သငျသညျအရလိမ့်မယ် 8 အရောင်အန်စာတုံး၏လိပ်, ရိုးရှင်းစွာအရောင်ထုတ်ဖေါ်ဖို့ဒီအန်စာတုံးကိုလှိမ့်. တူညီတဲ့အရောင်မဆိုယျြပိတ်ပင်တားဆီးမှုနှင့်အတူတူညီအရောင်များ၏ဘလောက်ဂိမ်းဧရိယာ၌ရိုက်ချိုးပါလိမ့်မည်. အဆိုပါဆုချီးမြှင့်စားပွဲကွဲပြားခြားနားသောအရောင်များကိုများအတွက် slot နှစ်ခုတန်းပါဝင်ပါသည်. ဂိမ်းဧရိယာ၌ရိုက်ချိုးလုပ်ကွက်အရေအတွက်ကြောင့်အရောင်များ၏ slot နှစ်ခုဆုကို table ထဲမှာဖြည့်ကြသည်မည်မျှဆုံးဖြတ်ပါလိမ့်မယ်. ဒါကြောင့်, ဥပမာ, သငျသညျရိုက်ချိုးလျှင်4ဂိမ်းဧရိယာထဲမှာအနီရောင်လုပ်ကွက်၏,4အနီရောင်အတန်း၏ slot နှစ်ခုဆုကို table ထဲမှာပြည့်စုံလိမ့်မည်. သင်လုပ်ကွက်ရမ်းပြီးလည်သကဲ့သို့သင်တို့လည်းအပို features နဲ့ချက်ချင်းဆုစုဆောင်းရန်အခွင့်အလမ်းရ.
ဒီအတွက်အပို features တွေ အခမဲ့လှည့်ခြင်းများအဘယ်သူမျှမအပ်ငွေလိုအပ် ဂိမ်းတွေဟာ:
သငျသညျပေါ်မှာပြသအပို Roll ရှိပါတယ်တဲ့ပိတ်ပင်တားဆီးမှုတပ်များလိုက်တဲ့အခါ, သငျသညျအန်စာတုံးတစ်ခုအပိုအလိပ်ရ.
သငျသညျ mini ကိုဂိမ်းပေါ်မှာပြသထားပါတယ်သောပိတ်ပင်တားဆီးမှုတပ်များလိုက်တဲ့အခါ, သင်တစ်ဦး Mini-ဂိမ်းကစားရ.
ဒါဟာ ပြီးသားငွေသား Buster ကစားခဲ့ကြသောသူတို့အဘို့သည်ကြီး, ဒါပေမယ့်အညီအမျှအဆိုပါအရင်ကဆိုရင်အားဖြင့်ပျော်မွေ့ပါလိမ့်မည်. ဒီအခမဲ့လှည့်ခြင်းများများအတွက် RTP မျှသိုက်လိုအပ်ဂိမ်းအကြောင်း 88.25%.